Nhau - Kuongorora kwemumba wePVP wekutengesa kunze muhafu yekutanga ye2020
PVC Kunze Kwemadziro Yakarembera Board
PVC Kona Varindi
PVC Masitepisi Handrail
Kuongorora kwemusika wePVC wekutengesa kunze muhafu yekutanga ye2020
Muhafu yekutanga yegore, musika wekunze wePvv wekutengesa kunze wakakanganiswa nezvinhu zvakasiyana senge zvipuka zvekumba uye zvekunze, akakwira nekudzika 'emakambani mashandiro, mitengo yezvinhu zvakasvibirira, zvigadzirwa nezvimwe. Musika wese waive wakashata uye mashandiro ePV kunze kwenyika aive mashoma.
Kubva munaKukadzi kusvika Kurume, zvakakanganiswa nemwaka wemwaka, munguva yekutanga kweMutambo weChirimo, vagadziri vePVV vekumba vane mwero wepamusoro wekushanda uye kuwedzera kukuru mukuburitsa. Mushure meMutambo weChirimo, wakakanganiswa nedenda, zvaive zvakaoma kumakambani ekugadzira ekudzika kuti awedzere chiyero chebasa ravo, uye kudiwa kwemusika kwese kwaive kushoma. Dzimba dzePVP dzekunze mitengo dzakadzikiswa. Nekuda kwekusarira kumashure kwemasheya epamba, PVC kunze kwenyika haina zvakwakanakira zviri pachena zvichienzaniswa nemitengo yepamba.
Kubva munaKurume kusvika Kubvumbi, pasi pekudzivirira nekubata kwehosha yepamba, kugadzirwa kwemakambani ari pasi pemvura kwakapora zvishoma nezvishoma, asi huwandu hwekushanda hwepamba hwakanga hwakadzikira uye husina kugadzikana, uye musika waida kuita kwakadzikira. Hurumende dzemuno dzakapa marongero ekusimudzira mabhizinesi kuti atangezve basa nekugadzira. Panyaya yekutakura kunze kwenyika, gungwa, njanji, uye nzira yekufambisa yakadzokera zvishoma nezvishoma kuchinyakare, uye kunonoka kutumira kwakasainwa mukutanga nhanho kwakapihwawo. Kunze kudiwa kwakajairika, uye epamba PVC ekisipoti makotesheni anonyanya kukurukurwa. Kunyangwe kubvunzwa kwemusika uye huwandu hwekunze hwakawedzera zvichienzaniswa nenguva yapfuura, chaiwo mashandiro achiri mashoma.
Kubva munaKubvumbi kusvika Chivabvu, denda repamba rekudzivirira uye kudzora rakazadzisa mhedzisiro, uye denda rakanyatso kudzorwa. Panguva imwecheteyo, chirwere ichi kunze kwenyika chakanyanya. Makambani anoshanda akataura kuti maodha ekunze haana kugadzikana uye musika wepasi rose hauna chivimbo. Kusvika kumakambani epamba ePV anotengesa kunze, India neSoutheast Asia ndiwo mainstays, nepo India yatora matanho ekuvhara guta. Izvo zvinodiwa muSoutheast Asia hazvisi kuita nemazvo, uye epamba PVC kunze kwenyika zvakatarisana nekumwe kuramba.
Kubva muna Chivabvu kusvika Chikumi, mutengo wepasi rose wemafuta wakakwira zvakanyanya, izvo zvakaita kuti kuwedzere kwekoteti yekoteti, iyo yakaunza rutsigiro rwakanaka kumusika weEthylene PVC. Panguva imwecheteyo, epasi epasi epurasitiki ekugadzirisa makambani akaenderera nekuwedzera mashandiro avo, zvichikonzera kudzikira kwehuwandu, uye yepamusha PVC nzvimbo yemusika yakaramba ichikwira. Iwo makotesheni ekunze ePVC madiski ekunze ari kumhanya pane yakaderera nhanho. Sezvo musika wepamba unodzokera pane zvakajairwa, kuunzwa kwePV kubva munyika yangu kwakawedzerwa. Iko kushingairira kwevekunze kwePV mabhizimusi ekushambadzira kwave kushomeka, kunyanya kutengeswa kwemudzimba, uye iyo yekunze arbitrage hwindo rakapfigwa zvishoma nezvishoma.
Iko kutarisisa kwemusika wePV wekutengesa kunze muhafu yepiri yegore mutambo wemutengo pakati pemamaki epamba neepamba ePV. Musika wepamba unogona kuramba uchisangana nemhedzisiro yekune dzimwe nyika mitengo yakaderera; yechipiri ndeyekuchengetedzwa kwepakati pePVC kuiswa munzvimbo dzakasiyana dzepasi. India inobatwa nekuwedzera kwemvura inonaya uye mabasa ekuvaka ekunze. Kuderera, kuita kwese kudiwa kunoitwa nehusimbe; chechitatu, nyika dzekunze dzinoramba dzichisangana nekusanzwisisika kwemusika kunounzwa nemhedzisiro yedambudziko redenda.
Post nguva: Kukadzi-20-2021
YEMAHARA KUSANGANA 0086-13291521819
Kero Qiushi Rd, Jinshanwei Town, Jinshan Dunhu, Shanghai, China.